top 5 Cities khamri In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Cities khamri In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel
lover kasta oo khamri run ogyahay in magaalooyinka khamri Yurub bixiyaan khamri la awoodi karo oo la yaab leh. From France Italy, oo dheeraad ah, dalalkaas waxaa loo aqoonsaday by badan oo ay leeyihiin raagay ugu fiican adduunka.
In ka qayb, tani waa sabab u tahay xaaladaha cimilada sii kordhaya haboon, laakiin weli farshaxan. Ma aha qof kasta waa og yahay sida loo sameeyo ku raagay ugu delicious.
Khamri ku caashaqay ogahay in meelaha qaar waa yara adag tahay in ay gaaraan tareen sida ay salka ku hayaan ay baadiyaha. nasiib wanaag, Western Europe ayaa dhowr magaalo oo weli aad ka bixin karto ku raagay ugu fiican Yurub. Plus, ma waxaad yeelan doontaa in ay dhibaato naftaada helitaanka hab si aad u hesho iyaga, sida oo dhan oo ka mid ah waa la heli karo tareen. Haddii dhibic aad bilaabo waa mid ka mid ah dalalka waaweyn ee Europe, aad leedahay doonaa waqti sahlan waxaa helitaanka.
Iyada oo dhammaan ka mid ah in maanka, aynu eegno liiska kama dambaysta ah ee magaalooyinka khamri ugu fiican Yurub oo sida loo soo booqan tareen.
Nasiib darro ma yaqaan qof kasta, Valley Rhine River ee Germany waxaa ka buuxa canab ah oo tayo leh. Waxay soo saaraan ku raagay ugu wanaagsan oo dhan Germany, iyo ugu iyaga ka mid ah ay gaaraan Koblenz.
Tani magaalada yar been on webiga Rhine iyo waxay bixisaa qaar ka mid ah baararka khamriga wanaagsan, iyo makhaayadaha ee gobolka. Waxaa si gaar ah u qurux badan, ma jeclaan qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee waaweyn ee degaanka.
The beeraha canabka ah ee gobolka ay yihiin caanka ah waayo, hadduu khamri Riesling ugu fiican adduunka. Haddii aad go'aansato in aad rabto in aad soo booqato magaalada muuqaal dabiici ah Koblenz, waxaad yeelan doontaa in ay isku dayaan hal galaas ama labo ka mid ah khamri cad oo qabow.
Helitaanka in Koblenz waa wax fudud, sida waxa ay leedahay mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee magaalooyinka khamri Valley Rhine oo dhan. Waa kalabadhka u dhaxaysa laba magaalooyinka waaweyn ee Jarmal - Cologne iyo Frankfurt, iyo tareenada soomi la doonayo in Koblenz labadaba ka. Waa maxay more, Magaalada been ah oo ku saabsan badan Rhine Valley wadada tareenka muuqaal dabiici ah.
Dhamaadka, Magaalada waa u dhow xuduudaha la Netherlands, Belgium, Luxembourg, iyo France. Taasi waxay ka dhigan tahay waxaad yeelan doontaa dhibaato ma helo tareenka ka yimid wadamada iyo sidoo.
Luxembourg in Tareenadu Koblenz
Vienna ma aha oo kaliya ka mid ah magaalooyinka ugu fiican in ay ku noolaadaan; waxaa ku dhex yiil magaalooyinkii khamri ugu fiican Yurub sidoo kale. dalka soo saarta badan oo khamri ah guud ahaan, inta badan taas oo ka canabka ah ay weheliyaan dooxada Danube. Vienna laftiisa waa mid ka mid ah caasimadaha adduunka yar in ay soo saartaa khamri ah oo magaalada jooga.
All of in ka dhigan tahay in aad fursad u heli doontaa in ay isku dayaan ka raagay ugu fiican dalka leeyahay in ay bixiyaan, midig ee Vienna. Intaas waxaa sii dheer, waa in aad ogtahay in sibraar khamri ah inay ku raaxaystaan ​​waa Weissburgunder.
Vienna waa caasimadda ah ee Austria iyo mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Europe, taasoo la micno ah in aad si deg deg ah waxaa heli doontaa tareen. Waa xarun dhexe tareenka in uu leeyahay xidhiidh dalal badan oo deriska.
Our qaado cad for Top 5 magaalooyinka khamri ku Europe waa Bordeaux, France
Kuwa idinka mid ah aqoon u leh raagay, ogahay in Bordeaux ee France waa mid ka mid ah caasimadaha khamri badan loo yaqaano dunida. Taasi waa sababta ay tahay on liiska magaalooyinka khamri ugu fiican Yurub. khamriga ka dhigay ee gobolka this caan All socodka Magaalada gala oo lagu diirsaday.
raagay Bordeaux caan ku yihiin qoraalada macdanta iyo midhaha ay, ka miro macaan si ay u midho u bislaaday macaan. raagay waxay kaloo ay leeyihiin awood u la yaab leh si fiican u sii gabowdid. dejiyeyaasha ayaa inta badan iyaga kaga tegi da'da dhowr sano ee.
Dabcan, uma baahnid inaad in ay isku dayaan khamri raagay oo hore ku kici nasiib ah in ay la kulmaan raagay ugu fiican ee gobolka. Waxaa jira badan oo khamri raagay oo la awoodi karo iyadoo saamiga qiimaha qiimaha gaarka ah. khamri The top aad u baahan tahay in ay halkan isku day waa Red Bordeaux.
Gaaritaanka magaalada ma noqon doonto dhibaato, wax dhib ah maleh meesha aad ku yaal tahay in Western Europe. Waa maxay more, ugu of khadadka tareenada socday dalab Bordeaux tareenada-xawaaraha sare. Waxaad u baahan tahay oo kaliya dhowr saacadood si magaalada ay gaaraan meel kasta oo France. Tareenka ayaa ka Paris gaadho Bordeaux ee ka yar 3 saacadood!
Toulouse in Tareenadu Bordeaux
Lyon in Tareenadu Bordeaux
Florence, Italy waa Khamri Cities ee ugu danbeysay ee Europe
jawharad ee Tuscany, haddii aanay wada Italy, Florence waa magaalada ugu fiican la raagay ugu fiican dalka. Waxaa jira dhawr tuulo oo magaaladii ku wareegsan in ay soo saaraan khamri yaabka Sangiovese oo dhan oo iyaga ka mid ah in ay u qalmaan in ay liiska magaalooyinka khamri ku Europe. Kuwani tuulooyinka qurux badan oo gudaha hanqadhka Talyaani way adag yihiin si ay u gaaraan, laakiin magaalada Florence ma aha.
Waxaad ka gaari karin magaalada tareen meel kasta oo Italy, ama dheeraad ah, sida Switzerland iyo France. Waxaa jira si joogto ah, tareenada-xawaaraha sare kuwa u taga dhowr jeer maalin kasta ka soo Milan iyo Rome, laakiin sidoo kale ka Venice. safarada waxay qaadataa in ka yar laba saacadood, oo aad fursad u helaan si ay u arkaan buuraha qurux badan iyo beerihii Italy.
Pisa in Tareenadu Florence
Sidaas diyaar aad ku raaxaysan magaalooyinka khamri Yurub waa? SaveATrain.com kaa caawin doona inaad u hesho in ay magaalo ka mid ah in Europe, soomi, cheap iyo dhoola!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/wine-cities-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride tareenada traintip tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly khamri